एमालेमै छ भाँडभैलो
एमाले वकिलबीच पार्टी कमिटीको नेतृत्वलाई लिएर पनि विवाद चर्किएको छ । राजधानी पेशागत जिल्ला कमिटीमातहत कानुन इलाका कमिटीको अधिवेशनमा नेतृत्वको विवाद हुँदा बिहीबारसम्मलाई निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित छ । अध्यक्ष बन्न एउटै खेमबाट हालका सचिव सूर्य गुरुङ र अशोक बराल कस्सिएका छन् । एकथरीलाई पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फँुयाल र रमेश बडालको साथ छ भने अर्को पक्षले माधव नेपालपक्षधर टीकाराम भट्टराई, रुद्र पोखरेल र रुद्र नेपालको सहानुभूति पाएको… विस्तृत समाचार
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा कार्यरत इञ्जिनियर मोहन रेग्मीले श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेको पाँच वर्षपछि सबैभन्दा ठूलो मानसिक र सामाजिक बेइज्जति भोगे । उनले मात्रै होइन, आमासँग अलग भएका दुई छोराले उस्तै तनाव झेले । नेपालमा महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान जारी भइरहँदा सदरमुकाम धुलिखेलमा यस्तै कुराको चर्चा छ । पुरुष विरुद्धको हिंसाबारे कुनचाहिँ महिला अधिकारवादीले बोल्छन् ? अधिकारका कुरा गर्नेहरूकै घरमा अधिकार हनन भएका… विस्तृत समाचार
प्राचीन एवं धार्मिक नगरीमा एकीकृत शहरी विकास आयोजनाको काम ६ वर्ष पछि शुरु हुन लाग्दा पनि कछुवागति छ । जनकपुरको पिडारी चोकदेखि भानु चोकसम्म ढलको काममा ढिलाइ हुँदा सर्वसाधारणलाई समस्या छ । कतिपय ठाउँमा काम सुस्त मात्रै नभई गुणस्तरहीनसमेत पाइएको छ । ह्युम पाइप बिछ्याउँदा स्पेसिफिकेशनअनुसार भएको छैन् । पाइप ओछ्याउँदा कम्पेक्सन गर्नुपर्ने, (सेलेक्टेड स्वाइल) तल बेडमा हाल्नुपर्ने र २० सेमी बालुवा ओछ्याउनुपर्नेमा प्लेट मात्र… विस्तृत समाचार
लोडसेडिङको खास के हो लफडा ?
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी प्रशारण लाइन ४ सय केभी, खिम्ती–ढल्केबर २ सय केभी, हेटांैडा मातातीर्थ १ सय ३२ केभी पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा निर्माण सम्पन्न भएर केन्द्रीय ग्रिडमा थपिएको हो । जसको अभावमा काठमाडौं लोडसेडिङ हटाउने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैनथ्यो । गत वर्षको फागुन ५ गते पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख मुकेश काफ्लेलाई सँगै दिल्ली लगेर ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रशारण लाइनको उद्घाटन गरेका थिए । अहिले… विस्तृत समाचार
जेलको डरलाग्दो जञ्जाल
कारागारलाई नेपाल सरकारले सुधार गृह बनाउने विभिन्न कार्ययोजना ल्याए पनि आन्तरिक प्रशासनमा नाइके कैदीको दमन, शोषणबाट अन्य साधारण कैदीबन्दी यातना सहन बाध्य हुँदै आएका छन् । सिन्धुली कारागार शाखामा नाइकेहरूको कुटाइबाट दैनिकजसो बन्दीहरू बिरामी भई स्थानान्तरण हुन बाध्य भएका छन् । त्यहाँका नाइके चौकीदार कर्तव्य ज्यान मुद्दाका मित्रलाल श्रेष्ठ, विदुर कार्की, गणेश श्रेष्ठ र जबर्जस्तीकरणी मुद्दाका यम्बर तामाङले बन्दीलाई शोषण गर्ने, अनावश्यक रकम माग्ने, सरकारले… विस्तृत समाचार
कसरी बग्छ उल्टो गंगा ?
दशैं सकियो, तिहार सकियो, छठ सकियो । खुशी खुशीमै नेपाली सेनाका लेखा अधिकृत र विभिन्न तहका कमाण्डर पृतनापति, बाहिनीपति, गणपति र जिल्ला हाँकेर बस्ने गुल्मपतिलाई चाहिँ अर्को विशेष खुशियाली छाएको छ । त्यो हो ०७३ माघ १ गतेदेखि ०७४ पुस मसान्तसम्म रसद पानीको व्यवस्था गर्ने ठेक्कापट्टा । यसमा ठेकेदार र हाकिमको सानोतिनो चलखेल नै हुन्छ । घटाघटलाई ठेक्का दिनुपर्ने नियम हँुदाहँुदै पनि पल्टनका कमाण्डरले आर्थिक… विस्तृत समाचार
‹ First Newer 12 13 14 15 16 Older